कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आजदेखिः ओली, प्रचण्ड र माधवले एउटै मञ्च 'सेयर' गर्लान ?
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आजदेखिः ओली, प्रचण्ड र माधवले एउटै मञ्च ‘सेयर’ गर्लान ?
यस्तो छ कार्यसूची
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ मंसिर २४, शुक्रबार ०७:२६
सत्तासीन नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आजबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ । दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नेछन् ।
महाधिवेशनमा ४ हजार ७ सय प्रतिनिधिमध्ये अधिकाशं प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उद्घाटनका लागि भृकुटीमण्डपमा १ सय ५० जनाभन्दा बढी क्षमताको मुख्य मञ्च तयार गरिएको छ । उद्घाटनमा भारतको भारतीय जनता पार्टी र कंग्रेस आईका प्रतिनिधिसमेत काठमाडौं आइसकेका छन् ।
तत्कालीन नेकपाको किचलो र त्यसपछिको विभाजनपछि ओली, प्रचण्ड र नेपाल एउटै मञ्चमा देखिएका छैनन् । यदि ओली आज भृकुटीमण्डप पुगेमा प्रचण्डसँग एक वर्षपछि र नेपालसँग पाँच महिनापछि मञ्चमा सेयर हुनेछन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन आज बिहान १० बजे हुनेछ । उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भोलि बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताउपर दाबी विरोध र जाँचबुझ पनि भोलि साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म हुनेछ । दाबी विरोधउपर निर्णय पनि भोलि साँझ ७ देखि ९ बजेसम्म हुने समितिले जनाएको छ ।